Daawo:-Hoogaamiyayaasha Midowga Yurub Iyo Madaxweyne Obama Oo Kulmay | Saxil News Network
Daawo:-Hoogaamiyayaasha Midowga Yurub Iyo Madaxweyne Obama Oo Kulmay
Berlin (Saxilnews):- Magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa uu Madaxweynaha Mareykanka BarackObama oo ku kula kulmay hogaamiyayaasha dalalka ugu weyn Yurub oo ka wada hadlaayey caqabadaha dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ee ay wajahayaan dalalka saaxiibada ah.
Kulan madaxeedka uu Obama la yeelanayo hogaamiyayaasha dalalka Germany, Britain, France, Italy iyo Spain ayaa sii ballaadhinaya wada-hadalladii uu maalin ka hor la yeeshay ra’iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel.
Kulanka oo u muuqda kii ugu dambeeyey ee Obama uu la qaato madaxdan ka hor inta uusan xukunka ka degin bisha January, ayaa Obama waxa uu miiska soo saaray midnimada iyo wada shaqeynta joogtada ee Mareykanka uu la leeyahay dalalkan.
Waxa uu carabka ku adkeeyey in Mareykanka uu sii wadi doono inuu dunida la macaamilo.
Obama ayaa madaxweynaha badalaya ee Donald Trump ugu baaqay inuu ka hortago Russia, isaga oo sheegay inuu rajeynayo inuu qaato siyaasad wax ku ool ah oo la mid ah middiisa.